décembre 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K1, Andriamizakason Rajaonah Ny Hasina, no nitarika izany.
Ny tantara fohy dia miresaka momba ny ankohonana tantsaha iray eny ambanivohitra, izay mamboly sy miompy. Mampitaha ny fahazoana vokatra tsara teo aloha sy ny amin’izao fotoana izao, noho ny tsy fisian’ny orana. Nitady vahaolana ary ireo tantsaha dia ny fitondrana amim-bavaka izany. Tsikaritry ny tantsaha namany anefa izany ka nilaza izy ireo fa tsy tokony ianareo irery no hivavaka fa isika rehetra. Nilatsaka tokoa ny orana noho ny vavaka izay natao. Naharitra teo amin’ny 10 minitra teo. Tao ny faly, tao ny gaga, fa naninona no izay fotsiny ? Mety vitsy ireo nino fa ho latsaka ny orana.
Toy izany koa isika. Taritina isika ho aty am-piangonana. Rehefa mivavaka amin’ny finoana isika mankaty am-piangonana. Rehefa mino amin’ny fonao manontolo dia hohazonao izay hirinao.
Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady namaky teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina nangalana sy nampifandraisina amin’ny hafatra dia Lioka 8 :50b « Aza matahotra, minoa fotsiny ihany ». Taorian’ny vavaka, nohiraina ny FFPM 39 « Sambasamba Zanahary ».
Rakotondrafara Nirina no nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina mialoha ny vakiteny. Namaky ny Testamenta Taloha dia Rakotovololona Malalatiana , Rakotovololona Lova, diakona, no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra ao amin’ny Isaia 12 :1-6 ; Lioka 1 :57-66 , 1 Tesaloniana 3 :6-13.
Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny FFPM 190:2 « Ry Fanahy Mpanazava». Niroso tamin’ny Toriteny taorian’izany.
Ny Isaia 12 :1-6 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra.
Isaia no nilaza ny Mesia, izany hoe Mpampinany evanjelisitra, loharanom-pamonjena ho an’ny vahoaka. Mila mitodika amin’ny mpino ho amin’ny fiainana mandrakizay.
Araka ny I Korintiana 1 :7, dia tokony hatoky ny Tompo daholo ny mpino.
Hafatra roa mahakasika ny hira fiderana no ampitaina amintsika :
· Hira fiderana ho fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny famindrampony ;
· Hira fiderana izay mitaona ny mpino noho ny fahalebiazany sy ny famonjena.
1- Hira fiderana ho fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny famindrampony
Inona no nahatonga ny olona nanao izay ?
Isaia 9-10, ny fahatezeran’Andriamanitra nampitahotra sy nampihorohoro no nahatonga ny famaizana ny olona. Andriamanitra anefa tsy mahafoy ny olona fa namindra fo ary nampitodika taminy. Vokatr’izany dia nisinda ny ahiahin’ny olona.
Manao ahoana anefa ny ankehitriny ? : mahalasalasa saina, tena mahagaga, tsy mahatohitra ny rendrarendram-piainana ny olona. Hita taratra eto amin’ny fiainan’ny firenena,fa tia dera, fahefana, voninahitra, vola ny olona. Mila mibebaka isika satria Andriamanitra feno famindrampo ny Andriamanintsika.
Alaim-panahy ny olona, manao izay mahafinaritra mandritra ny herinandro, fa rehefa alahady dia mitodika amin’Andriamanitra. Mila mitandrina sy miambina isika. Mila mibaboka amin’Andriamanitra raha te hanana fifaliana. Ataovy mazava ny fibebahana ary tanteraho ary aza mamerina intsony.
Isaia and. 2, maneho ny fahatokiana amin’Andriamanitra. Andriamanitra no isaorana sy deraina. Ny famonjena tany Egypta dia tandindon’ny famonjena vaitan’i Jesoa Kristy. Araka izany ny fanekena an’i Jesoa Kristy no tena lalana, ary manafaka antsika.
2- Hira fiderana izay mitaona ny mpino noho ny fahalebiazany sy ny famonjena
Manao ahoana ny fiantraikan’izany eo amin’ny fiainan’ny olona voavonjy ?
Mampahatsiahy ny tantaran’i Elisabeta. Teo amin’ny fahanterany izy vao niteraka zazalahy. Araka izany, nifaly niaraka tamin’ny mpiara-belona taminy izy, novahan’Andriamanitra ihany koa ny lelan’i Abrahama, izay naraikitr’Andriamanitra noho ny tsy finoany. Izay no vokatry ny fanekena an’Andriamanitra.
Andriamanitra irery ihany no afaka misintona sy manampy. Raha manana faniriana hiditra amin’ny fanatanjahan-tena ny olona iray dia mampiseho ny fahavononany hiditra ao izy. Ankoatra izany dia miatrika fifaninana araka ny fanazarantena sy ny fandaminana. Ny Kristiana kosa dia mitana ny fanekena amin’ny toerana rehetra, ary mijoro vavolombelona, Ny tsy fanatanterahana ny andraikitra dia miteraka tsy fahombiazana ho an’ny ekipa. Ny fitafiana ny anaran’i Kristy dia mitaky andraikitra.
I Korintiana 9 : 25 : « ary ny mpiazakazaka dia mahonontena amin’ny zavatra rehetra… ».
Misy ny andraikitra miandry ny mpitoriteny sy ny katekista. Andriamanitra Ray dia nanao sorona ny Zanany lahitokana mba ho famonjena ahy sy ianao. Tsy afaka miala amin’izany ny mpitory na iza na iza.
II Timoty 4 :2 « mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana ». Asa fanompoana miorina amin’ny tenin’Andriamanitra, teny ivelomana. Izay mihinana no ho velona. Izy no manome sakafo, izay voky ihany no mandeha. Ny fandalinana na fiofanana natao dia baikon’ny Tompo. Asa misiona no andrasan’i Kristy. Isika Fiangonana dia tompon’antoka zato isan-jato amin’ny fanapariahana ny tenin’Andriamanitra. I Petera 5 : 2-3 :« Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ny sitrapo, tsy amin’ny fitiavana harena maloto fa amin’ny zotom-panahy ». Tsy ho mpanjakazaka, amin’ny anjara fiandrasana, fa ho fianaran’ny ondry ».
Fehiny : Tsy misy fitomboana ara-panahy raha tsy miala amin’izao tontolo izao. Rehefa an’ny Tompo isika dia tokony hanana fifaliana. Raha misy zavatra mahatezitra, dia tokony tsy hilona maharitra amin’izany, fa mitodika amin’Andriamanitra.
Ho famaranana ny fampianarana sy fampitana ny Tenin’Andriamanitra, niarahan’ny Fiangonana niredona teo am-pitsanganana ny hira FFPM 351 : « Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona ».
Nisy ny feon-javamaneno.
Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka izany isika. Nasandratra ny vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra. « Andriamanitra tsara, isaorana ny fotoana nomenao anay. Tsapanay fa Ianao dia tsy mitsahatra miteny aminay. Tokony hanambara hira fiderana hitaona ny mpino hanambarana ny fiderana Anao izahay amin’ny asa fanompoana, hizara ny fiofanana. Nomena maimaim-poana izahay dia tokony hizara maimaim-poana. Maro ny tsy tanteraka ary mifona Aminao izahay Tompo. »
Toy izao ny teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : « Dia ho fafazako rano madio ianareo, ka hadio, ny mba afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka .hanaraka azy » Ezekiela 36 :25-27. Amena.
Nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 547 : 1-4 : « Ry Jesoa Tompo tianay » narahan’ny fanekem-pinoana laharana fahatelo sy ny vavaka mangina.
Razanarivelo Laure no nanao ny tatitry ny asan’ny Fikambanana Mpitoriteny sy Katekista (FMK) ary ny vita fiofanana. II Timoty 2 :2 « Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany koa » no teny fanevan’ny Fikambanana ary nentina niarahabana ny Fiangonana sy nanazavana ny andraikitra sy ny tanjon’ny Fikambanana.
Taorin’ny tatitra dia nanao ny anjara hirany mpikambana, hira FF 24 :2 « Mandrosoa, miasà ».
Ny Biraom-piangonana, Razafimaharo Maminirina, no nanatanteraka izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I Korintiana 3: 17b : « Fa masina ny tempolin’Andriamanaitra, dia ianareo izany ». Toy izao ny asa nisongadina, tsara ho fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:
· Talata 21 desambra : FJKM Paragoay – Krismasy Synodamparitany andrefana
Raharaha eto an-toerana :
· Sabotsy 18 desambra :
o fanadiovana faobe ny trano fiangonana niarahana tamin’ny Vaomieran’ny Fananana
o fanaovana vaksiny niarahana tamin’ny K160 taonan’ ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena
· Sabotsy 25 desambra : fidirana in-droa : amin’ny 7 ora sy amin’ny 10 ora. Tsy misy ny fisoratana anarana fa mitondra taratasy misy ny anarana, ny adiresy sy ny laharana finday izay omena ny tompon’andraikitra mialoha ny hidirana ato am-piangonana
· Alahady 26 desambra :
o Fidirana indray mandeha amin’ny 9ora
o Fivoriana ankatoky ny Fandraisana
· Fizarana valisoaho an’ ireo mpianakavin’ny finoana afa-panadinana ofisialy/ara-panjakana, ireo mpianatra mpitoriteny, mpiomana ho Mpitandrina
· Mitohy hatrany ny fivorian’ny sampana, sampan’asa eto amin’ny tananan’ny Fiangonana
· Antsoina ireo zokiolona 70 taona mihoatra mba hisoratra anarana hanavaozana indray ny lisitra natokana ho amin’izany
· Mitohy ny fiainan’ny Fiangonana. Hohamafisina ny fepetra ara-pahasalamana noho ny fihanaky ny valanaretina. Entanina ny mpianakavin’ ny finoana tsirairay hanaraka izany fepetra izany : fanasana tanana, elanelana iray metatra, fanaovana arovava orona,….
Nohiraina ny hira FFPM 813 : « Tia zaza ». Ny zaza Rabenandrasana Arivero Soa Miahy no natolotra sy nentina amim-bavaka tamin’izany.
Ny Biraom-piangonana, Ralaindimby Haja, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao xxxxx .Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana sy ny hira nangatahiny :
· Hira FFPM 2 :1 : « Misaora an’i Zanahary » noho ny nahavitan’ny Concert de Noel an’ny RFF
· Hira FF 7 :1 : « Tsy hainay ny hangina », noho ny nahatratrarana ny faha 30 taonan’ ny fanambadiana.
Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena, nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 545 :1 « Endrey izany hafaliana ».
Fitondrana amim-bavaka sy fizarana valisoa notanterahiny STK Zokiny ho an’ireo afaka fanadinana ara-panjakana, sy ireo nahavita ny fiofanana ary ny mpianatra Mpitandrina.
Salamo 103 :1 « Misaora an’i Jehovah ry fanahiko, Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina ».
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany.
Nitondra amim-bavaka ny Herinandro sambatra sy ny fahasalaman’ny mpianakavin’ny finoana, ny Krismasy sy ny fetim-bokatra, ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ka nomena valisoa, ny fikambanan’nyy mpitoriteny sy ny katekista ary ny mpianatra nahavita fiofanana, ny Sampana sy sampan’asa eto anivon’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena, ireo nanana taom-pankalazana 20 sy 30 taona, ireo mankalaza ny jobily, ny komity faha 160 izay hamarana ny fankalazana, ireo manana fahasahiranana, ny tsy salama,ny manana fahoriana, ny manana hataka manokana, ireo nanao raki-pisaorana, ny RFF izay nahavita ny Concert de Noel, ireo nahatsiaro ny tsingerinandro nanorenana ny fanambadiana. Ireo mpanompo nandray anjara tamin’ny voka-dehibe, sy izay mbola hanatanteraka izany amin’ny hoavy. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.
Nohiraina ny FFPM 338 « Arovy aho Tompo». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nipetraka ny Fiangonana. Notononina ny Trinite.
· Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto
· Nikirakira ny fafana : Rabiazamaholy Mahery
· Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves
· Naka sary : Ramahery Hasina
· Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly
ALAHADY 12 DESAMBRA 2021 “MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO”
Alahady fahatelo amin’ny Advento
“ANTOKY NY FAMONJENA”
" Ary ny zotom-ponareo dia namporisika ny maro " II Korintiana 9 : 2b
Alahady natokana ho ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady “ANTOKY NY FAMONJENA”, noho izany dia mpikambana avy ao no nandray anjara tamin’ny fandavorariana ny fotoam-bavaka. Ny Mpitahiry vola Rakotoharisoa Michel no nitarika ny litorjia. Ny Mpitandrina Rakotoarivony Hubert no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny fandaharana iombonan’ny FJKM avy amin’ny Sekoly Alahady Foibe no narahina, litorjia endriny faharoa.
Azo henoina ato ny hafatra
Nisy feon-javamaneno fidirana. Noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira fanevan’ny faha-160 taona “ FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY ”.
Taorian’ny teny fampidirana sy fanolorana ny vahiny dia nisy fiarahabana apostolika. Novakian’ny Fiangonana miaraka teo am-pitsanganana ny SALAMO 16 : 1-11. Noredonina ny hira FFPM 780 : 1 “HE DERA LAZA HERY”, nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Notohizana avy hatrany tamin’ny fotoanan’ny ankizy.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha-7, Ramanandraibe Ravosson Haingo, no nitarika izany. Nisy vavaka.
Vazaha roa lahy nivahiny tany ambanivohitra izay nahita olona efa-mianaka niasa an-tanimbary no noresahina. Ireo voalohany dia naka sary sy ontsa nahita ny fahantran’ireto farany izay nivarotra ny ombiny ka ny vidiny nataony fanatitra ho an’Andriamanitra. Na teo aza ny fahantrany dia hita ho nanam-piadanana ireo. Ohatra tsara izany zotom-po izany ary nahazoana fanampiana tany aoriana. Samia manahaka azy 4 mianaka isika rehetra araka izay tandrify azy. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny II KORINTIANA 9 : 2b : » Ary ny zotom-ponareo dia namporisika ny maro » .
Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 786 : 4 “NY TENINAO JEHOVAH”. Nisy vavaka. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 761 : 1 “RY JESOA ZOKY BE FITIA”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha dia notontosain-dRakotonarivo Steven. Rakotonarivo Kaloina sy Razafimbololona Kasmira kosa no namaky ny Testamenta Vaovao. Ireto avy ny perikopa voalahatra : OHABOLANA 23 : 12-18 ; LIOKA 1 : 39-45 ; II JAONA 1 : 1-6. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 786 : 1 “NY TENINAO JEHOVAH” mialoha ny toriteny.
Matetika dia zavatra hafahafa no manintona sy isontonana ny olona : tsikera, fanaratsiana, fanabantiana, famotehana. Mipetraka ny fanontaniana raha mbola misy anton-javatra mitondra fifaliana ho ansika ihany amin’ny fiainana manoloana ny zava-misy aparitaky ny haino aman-jery.
Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny OHABOLANA 23 no nakana vatsy, izay nampifandraisina amin’ny Teny nosafidian’ny Sekoly Alahady hoe : “ Ary ny zotom-ponareo dia mamporisika ny maro”.
I Paoly no mampita hafatra ho an’ny mpino tany Korinto. Ny resahina eto amin’ny perikopa dia ny nandraisana fanampiana avy amin’ny malala-tanana : misy nanome mihoatra noho izay tokony ho zakany. Mahatonga ny olona haneho fihetsika izany (provoquer). Rehefa haintsika ny mampiasa ny loharanon-karena dia afaka manao zavatra lehibe isika. Mbola misy tsy voatrandraka eo anivon’ny Fiangonana, izay no ilana zotompo sy fanolorantena. Mandringa ny fanabeazana raha tsy miaraka ny Fiangonana, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra sy ny ankizy/tanora beazina.
Boky ahitana karazan’olona maro ny Baiboly, tsy tao amin’Israely ihany fa ny manodidina koa. Ny OHABOLANA mampianatra antsika hahalala : tsy tenim-pahendrena fotsiny, na tenim-paminaniana avy amin’ny fanambarana manokana avy amin’Andriamanitra fa vokatry ny fandinihana avy amin’ny saina mahiratra sy ny traikefan’ny hendry.
Vanim-potoana amohazana ny fisainana kristiana ny fahaiza-mandinika ny fizotry ny fiainana, tsy voatery amin’ny zavatra nianarana. Manome anatra fehezin’ny fahatahorana an’Andriamanitra izany tenim-pahendrena izany.
Ny Sekoly Alahady sy ny Fiangonana kristiana dia afaka mitondra fifaliana satria manana ny Tenin’Andriamanitra izay refy mazava, tsy iadian-kevitra, marina. Atodiho hanaiky ny fananarana ny fonao hiavian’ny voka-tsoa. Tohero ny hevitra rehetra izay mandà an’Andriamanitra mba hananana fanantenana.
Manana fifaliana ny Sekoly Alahady satria mahay sy mitaona hampihatra ny fananarana (and.13-14). Ilaina ny fahaizana mampianatra ny zanaka hifikitra amin’ny fahamarinana. Ny fahatsapana ny vokatry ny finiavanao no zava-dehibe. Mandania fotoana ho an’ny zanakao fa mila anao ray/reny ho filamatra sy ho môdely izy mba tsy handehanany ho any amin’ny fitoeran’ny maty. Miverena amin’ny loharano. Safidio ny hampihatra ny marina mba ho tsara ety an-tany sy any am-parany.
Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amena.
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izany. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana nikeanina (Laharana 2) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
TATITRY NY ASA
Ny Mpitantsoratry ny fivoriana Rabenasolo Landy no nanao ny tatitry ny asan’ny Sampana Sekoly Alahady. Novakiany koa ny hafatra avy amin’ny Sekoly Alahady Foibe. Rehefa izay dia nanao ny hira HF 7 “ANTOKY NY FAMONJENA” ny fianakaviambe.
Ny Biraom-piangonana, Razafimaharo Mamy, no nilaza ny raharaha. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KORINTIANA 17 : 3b. Toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :
Alatsinainy 13 desambra 2021 : fanombohan’ny herinandron’ny Fikambanan’ny mpitory teny sy katekista vita fiofanana ;
Talata 14 desambra 2021 amin’ny 6 ora hariva : fivorian’ny Biraon’ny rafitra miaraka amin’ny Biraom-Piangonana handinihana ny tetibola 2022 ;
Sabotsy 18 desambra 2021 :
amin’ny 8 ora maraina fivorian’ny Mpihevi-draharaha;
amin’ny 1 ora tolakandro : asa iombonana, fanadiovana faobe.
Alahady 19 desambra 2021 : fizarana valisoa karakarain’ny STK Zokiny ho an’ny zanaky ny Fiangonana afaka fanadinam-panjakana.
Ireo sampana mpihira dia manomana antsa sy manasa ny Fiangonana hanohana azy ireo :
ANDRO SY ORA
RFF, Imanoela, amintsika Andriamanitra
16/12 @ 7 ora hariva
Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-20 taona. Ny vahiny:Ramanantoanina Rija
HAFA, Fifaliana feno ao amin’ny Tompo
17/12 @ 6ora15 hariva
Tapany voalohany: Rakotoarivony Noël
STAF, Krismasy fifaliana
19/12 @ 6 ora hariva
Famaranana ny faha 30 taona
SA, Faly be aho, teraka Jesoa
25/12 @ 3 ora tolakandro
Noho ny firongatry ny valanaretina COVID, nisy ny fanentanana fanajana ireo fepetra mba hitandroana ny fahasalamana.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, nisaotra ireo manana anjara, niarahaba sy nirary soa ny sampana Sekoly Alahady. Nankasitraka ny Mpitandrina nitory ny Teny (Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe teo aloha, Filohan’ny filankevi-pitantanana ao amin’ny SAF/FJKM) izy), nanao antso ho an’ireo hiditra katekomena. Nanentana koa izy ho fitondrana am-bavaka ny fanomanana ny herinandro sambatra, ny krismasy, ny voka-dehibe. Nisy mpivady natsangana niaraka tamin’ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviana, noarahabaina, nirariana soa sy nentina amim-bavaka. Nitohy tamin’ny fanati-pisaorana ny fotoana.
Ny Biraom-piangonana Ralaindimby Haja no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SALAMO 117 : 1-2 izy. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka ; tontosa ny fanamasinana ny fanambadiany ; ankohonana nahazo fahasoavana. Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireo, izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanatazana ny rakitra, dia : A 16 “ISAORANAY JEHOVAH TOMPONAY” ; “MISAOTRA ANAO IZAHAY”.
Notononina ny voka-dehibe voaray androany sy hatramin’izay. Amin’ny 25 desambra 2021 no ivon’izany, kasaina mbola hitohy hatramin’ny volana janoary 2022.
Ny hira vavaka FFPM 443 : 2 “RAISO HO ANAO NY FOKO”.no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena. Ny Filoha mpanampin’ny Sekoly Alahady Rabenahy Mahaly sy ny Mpitahiry vola Rabearinoro Dina no nandray ny rakitra faharoa teo amin’ny alitara.
Fizarana valisoa ho an’ireo mpianatra Sekoly Alahady nahavita fanadinana Foibe no asa vavolombelona androany. Nanomboka izany ny Filoha Razafindrasata Abel. Nivavaka Rabenahy Mahaly. Rehefa izay dia nisy fandaminana ary notononina misesy ny anaran’ny mpampianatra sy mpianatra isaky ny kilasy : ny mpianatra K1 hatramin’ny K4 teny an-toerana ihany no nomena valisoa ; ny K5 noho miakatra kosa , nandroso teny amin’ny alitara. Rabearinoro Dina no nanao vavaka famaranana.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana sy nangataka mba hampiharan’ny Fiangonana izany eo amin’ny fiainana. Voatonona koa ny mpitory Filazantsara sy mpitondra fivavahana rehetra, ny toby masina, ny akany fitaizana. Tsy diso anjara amin’izany ny tanjona kendren’ny Fiangonana, ny kristiana rehetra, ny sampana Sekoly Alahady, ny Mpitandrina nitory Teny sy ny ankohonany mba hahefa ny asany, ny fanapan-kevitra hiroso amin’ny fianarana katekomena, ny herinandro sambatra, ny krismasy, ny ivon’ny voka-dehibe, sampana sy sampanasa ary asa sy ireo manao fankalazana. Notsaroana koa ny sahirana, marary, mana-manjo, manana hataka manokana, ireo nanao raki-pisaorana sy voady. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny vavaka.
Notononina avy hatrany ny tondrozotra 2021 manao hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Nohiraina ny FFPM 790 : 1 “JESOA O SAKAIZA TSARA”. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 808 : 1 “EO AN-TRATRANAO JESOSY”. Natao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite ary ny feon-javamaneno no nanaraka izay. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra ny fotoana.
Nitendry orga : Rajaofetra Philippe, nampian’ireo mpiofana ho mpitendry orga (Randriambeloson Sitraka, Rajaofetra Anthonio, Raharinoa Randriamparany Fenitra)
Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kantoniaina
Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova
Alahadin’ny Firaisan’ny Diakona sy ny Loholona, FJKM Amparibe Famonjena
“Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo,” Filipiana 4: 4a 4a
Alahady voalohany amin’ny volana desambra 2021, ary fotoana izay ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe: « MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO ».
Alahady faha 2 amin’ny Advento ary ho an’ny FJKM Amparibe Famonjena manokana dia natao ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Firaisan’ny Diakona sy ny Loholona na ny FDL.
Ny Loholona Rabako Ralambonirina Jean-Jacques no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia Voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina.
Ny Mpitandrina Robel Bruno, izay zanaky ny Fiangonana ihany, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nisy ny fiarahana nandray ny Fanasan’ny Tompo, notarihan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, taorian’izao fanompoam-pivavahana izao.
Notanterahina avy hatrany ny hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ».
Nanao ny Fiarahabana Apostolika ny Mpitarika, ary nitohy tamin’ny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra izany, tamin’ny famakiana ny Salamo faha 98 :1-5 manao hoe:“Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà. Mankalazà an’i Jehovah amin’ny lokanga, Dia amin’ny lokanga sy ny feo fihirana.” Amena!
Natao ny hira 539 and.1-2 “Faly dia faly”, nentina nidera ny Tompo.
Izao no vavaka fisaorana an’Andriamanitra notanterahin’ny Fiangonana tamin’ity fotoana ity:
“Andriamanitra Tomponay ô! Masina Ianao, koa indreto izahay Fiangonanao miara-manandratra vavaka ho fiderana Anao. Andriamanitra marina Ianao ary manao fahagagana mandrakariva eo imasonay. Mpamonjy anay amin’ny tsy fahatanterahanay Ianao, koa izany no ifalianay. Nombanao sy nosakambininao mandrakariva izahay tamin’ireo adim-piainana maro samihafa nosedrainay, ka nahatonga anay ho mpandresy tahaka Anao. Nomenao izao Alahady, andro tsara izao izahay, hihaonanay sy hifalianay Aminao eto amin’ity Fiangonanao, Amparibe Famonjena ity. Koa raiso Tompo izao vavakay izao. Ekeo re ny fiderana sy ny fisaorana atolotray Anao Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, Amena!”
Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia araka izay voalaza manaraka izao:
“Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah.
Mitadiava an’i Jehovah sy ny heriny, Katsaho mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran’ny vavany, Hianareo taranak’Isiraely mpanompony, Hianareo olom-boafidiny, taranak’i Jakoba. Jehovah, Izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany.” I Tantara 16:10-14.
Natao ny hira 531:1 “Ry Jesoa Loharanon’aina”. Natao ny vavaka fifonana avy eo.
Tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra isika fa nivily tsy nanaraka ny lalàny, koa izao no vavaka niombonan’ny Mpianakavin’ny Finoana, nifonana tamin’Andriamanitra: “Tompo Andriamanitray ô! Mifona Aminao izahay fa diso teo anatrehanao, variana tamin’ny olana sedrainay isan’andro izahay, ka nanadino ny niantoraka taminao. Tsy tsaroanay ny famonjena lehibe notanterahinao ho anay, koa ankehitriny ary, manatona Anao izahay. Raiso re Tompo ny fifonanay, mihainoa ny vavakay, ary hampamirapirato aminay ny tavanao; fafao re ny helokay. Amena!”
Ny hira 201 and. 1 “Midina Tomponay” no hira nentina nangataka ny herin’ny Tompo.
Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana tamin’ny Tompo: “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao; koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao; Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon’Andriamanitra hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao Aminy koa isika. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina. Aleloia! Amena!”
Ny hira FF 34: 1, 3 “Tompo Malala ô!” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny fandraisana ny famelan-keloka.
Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona. Ny Fanekem-pinoana Apostolika no nentina nanambara izany.
Ny mpampianatra K7, Zoky Rahalivaseheno Noro, no nanantanteraka izany.
Teo am-panombohana, dia nanao vavaka ho fisaorana an’Andriamanitra ny tompon’anjara, noho ny fotoana sarobidy omen’ny Tompo ny tanora ahafahany mihaino sy mahita zava-mahagaga amin’ny fandraisana izao Tenin’Andriamanitra izao.
Araka ny lohahevitra izay banjinina manao hoe: “Minoa ny fifaliana ao amin’ny Tompo “, dia noraisina ny Teny ao amin’ny Filipiana 4: 4a “Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo”, mba hitondrana ny hafatra.
Nisy mpivady iray izay nifanolotra fanomezana noho ny fahatongavan’ny noely. Na dia tsy nifanaraka tamin’izay nilan’ny tsirairay azy avy aza ny fanomezana, dia nifaly ihany ireto mpivady ireto.
Ny hafatra dia hoe: Mila mifaly amin’ny zavatra rehetra sy amin’ny fotoana rehetra isika. Taorian’ny hafatra dia nisy ny vavaka ary nofaranana tamin’ny fihirana ny hira faha 71: Mihainoa, Mihainoa! and. 2 izany.
TATITRY NY FDL
Ny Diakona Rajaonah Hanta Oliva no nanantanteraka izany. Ny Jaona 15:16a: “Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo”, no tondrozotran’ny FDL eto amin’ny SPAA10.
Notsiahivin’ny mpanao tatitra ny fisian’ny mpikambana miisa valo izay nodimandry tamin’ity taona ity.
Ny volana janoary dia nisy ny fotoan-dehibe fanokafana ny taona vaovao tao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.
Ny volana febroary dia nisy ny fiofanan’ny Diakona sy ny Loholona teto amin’ny Fitandremana.
Nisy ny fanatrehana ny fivorian’ny FDL Antananarivo Renivohitra.
Nisy ny fanatrehana ny fivorian’ny Komity lehiben’ny FDL Synodamparitany SPAA10.
Nisy ny fanatrehana ny fiofanana mahakasika ny tetik’asa “Talenta Mifanasoa”, izay miompana indrindra amin’ny fambolena.
Ny volana septamba dia niatrika ny fivorian’ny FDL SPAA10 Faritra antsinana.
Ny volana oktobra no nisy ny fiofanana faharoa teto amin’ny Fitandremana.
Ny volana novambra no nitsidika ny TPM tany Fianarantsoa isika teto Amparibe.
Noho ny toe-draharaha misy dia tsy tanteraka kosa ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao 2021 ary tsy tontosa ihany koa ny fivoahana an-tsaha.
Nanatanteraka ny hirany ny FDL taorian’ny tatitra, ka hira FF 2:1, 4” He! Manolo-tena” no natao.
Ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy no nanantanteraka izany. Ny IKor 3: 17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” no nentiny niarahaba ny Fiangonana.
Taratasy fanasana avy any ivelany:
-Foibe FJKM: Sabotsy 18 desambra eny Andanona ny fambolenkazo iombonana. Fiaingana: 6 ora maraina eo amin’ny Esplanade Analakely; fiara iombonana 6000 Ar ny sarandalana; sakafo 2500 Ar. Fisoratra anarana ao amin’ny Foibe FJKM varavarana 204.
-SPAA 10: Alahady 12 desambra tolakandro amin’ny 2.30, Antsam-panahy STK ao amin’ny Aumônerie Protestanta Befelantanana. Ny rakitra dia entina hanampiana ireo marary ao amin’ny sampana Pneumologie izay hiahian’ny sampana.
-Toby Getsemane Antambohomena: Alarobia 8 desambra 2021, Fanompoam-pivavavahana fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha20 taonan’ny Toby. Ezaka SINIBEN-DRANO (Château- d’eau) hatsangana eny Antambohomena. Mandefa valopy miisa 22 izy ireo ahafahantsika mandray anjara.
-Chaîne d’honnêteté: Alahady 12 desambra 2021 @ 2 ora tolakandro ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana, Fanompoam-pivavahana fanamarihana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny kolikoly.
–FJKM Tranovato Ambatonakanga / SAMPATI: Ho fankalazana ny faha 30 taona ny SAMPATI FJKM Tranovato Ambatonakanga dia mikarakara hetsika ara-pahasalamana“ fizahana maso” amin’ny 11 desambra sy 18 desambra 2021 ao amin’ny Akany Ambatonakanga . Ny saran’ny fizahana dia 5000 ar ary hisy solomaso azo jifaina amin’ny vidiny mirary.
Raharaha eto an-toerana:
– Manomboka alatsinainy ny herinandrom-bokatry ny sampana Sekoly Alahady
– Filazana manjo: Andriamizakason Rajaonah Ny Ando Lantoniaina dia nodimandry ny alarobia 1 desambra 2021 teo amin’ny faha 49 taonany.Ilazana ny Mpitandrina mivady sy ny Fiangonana , ny Sampana SA , STK Zo ary ny SAMPATI.
– Fiantsoana fanambadiana:
1- Rakotonarivo Vatsy Ambinina sy Ramasindraibe Hobiniaina: Fanamasinana hotanterahina ny zoma 10 desambra 2021 amin’ny 9 ora sy sasany maraina eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.
2- Ratavilahy Nomenjanahary Ronald sy Razafindravelona Volamihanta Nirina: Fanamasinana hotanterahina ny sabotsy 11 desambra 2021 amin’ny 10 ora sy sasany maraina eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.
– Fiantsoana faharoa:
* Gervos Léonander sy Ramilison Daniella
*Rakotondramboa Sandy Jeremia sy Casimir Sandy Laurence
* Razafimandimby Niaina Tiantsoa sy Rajoelinarivo Saholy Elia
– Fiantsoana voalohany: Ny zanaky ny Fiangonana vavy Rakotomavo Hanitriniaina dia hampakarin-dRandriamananjara Ny Aina harijaona ho vadiny.
Fiantsoana fivoriana sy filazana samihafa
– Antsoina ny solotenan’ny rafitra handrafitra ny Komity Fisotron-drononon’ny Mpitandrina ho ny alahady 12 desambra aorian’ny fanompoam-pivavahana.
– Komity faha 160 taona: Hisy indray ny fanantanterahana vaksiny fiarovana amin’ny Covid19 amin’ny sabotsy 18 desambra ho avy izao ka ny vaksiny Jensen tsindrona tokana no atao amin’izany ; koa asaina ireo rehetra tsy mbola nanao vaksiny ka maniry ny hanao izany mba ho tonga eto amin’ny Fiangonana.
– STKZo: Ny alahady 19 desambra ny fizarana valisoa: afaka fanadianana ara-panjakana, fandraisan-tanana ireo mpianakavin’ny finoana nahavita fianarana SETELA, SEFALA, SAAM,FITELA,SEMI. Ny taratasy fisoratana anarana dia raisina ao amin’ny Efitra atsimo, ka averina amin’ny STKZo hatramin’ny 12 desambra 2021.
– Sampana Dorkasy: Talata 7 desambra fiarahana amin’ny sampana Fifohazana manomboka amin’ny 2 ora.
– VMFP na Vondrona Manambatra ny Fanomezam-pahasoavana : Fiantsoana Fivoriambe faharoa sabotsy 11 desambra, 10 ora maraina, Akany Rainimamonjy.
– RFF na Rindra Fialamboly sy Fanatanjahantena: Mitohy ny fanazarantena, taranja Basket sy Volley ao amin’ny RMI Analakely ho an’ny Basket isaka ny sabotsy maraina amin’ny 8 ora; eny amin’ny ESCA Antanimea ny Volley ny sabotsy amin’ny 9 ora.
Voka-dalao manasa-dalana, taranja Basket tournoi karakarain’ny FJKM Anosivavaka: ny FJKM Amparibe dia nandresy ny FJKM Ambodimita tamin’ny isa 65 noho 64 . Ny lalao famaranana dia hotanterahina amin’ny sabotsy 11 desambra 2021.
Ho tohin’ny fankalazana ny faha 20 taona, ny RFF dia hanantanteraka Concert de Noel nampitondraina ny lohateny hoe : “ Imanoela amintsika Andriamanitra” izay hotontosaina ny Alakamisy 16 desambra amin’ny 7 ora hariva ao amin’ny ARENA IVANDRY.
– Sampana Taniketsa: Alahady 19 desambra hariva, Antsam-panahy hanomboka amin’ny 6ora hariva.
– Vaomiera Vola: Antsoina ny mpikambana ho tonga amin’ny fivoriana ny talata 7 desambra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana . Antsoina ihany koa ny Biraon’ny rafitra rehetra ho tonga amin’ny fivoriana izay hiarahana ny alarobia 8 desambra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.
– Vaomieran’ny Fananana: Fivoriana ny talata 7 desambra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.
– Vaomiera Aim-panahy: Alahady 26 desambra, fizarana valisoa ho an’ireo izay nandray anjara tamin’ny fahalalana Soratra Masina ny volana septambra lasa teo .
– Sekoly Alahady: Fandaharana herinandrom-bokatra :
Alatsinainy 6 desambra amin’ny 6ora latsaka fahaefany fotoana hiarahana amin’ny AFF.
Alarobia 8 desambra famangiana ny Akany eny Tangaina , fiaingana amin’ny 11 ora sy sasany. Entanina isika hanolotra fanomezana toy ny PPN ( vary , siramamy , voamaina , sns…) Aterina ao amin’ny mpiandry tananan’ny Fiangonana hatramin’ny Alarobia amin’ny 10 ora maraina.
– Fanentanana natao manoloana ny firongatry ny aretina Covid 19 no namaranana ny filazan-draharaha.